खुशीको खबर: अष्ट्रेलियामा को’रोना लागेका नेपाली यु’वक ७ दिनमै निको भएर अस्प’तालबाट फर्किए ! – Butwal Sandesh
खुशीको खबर: अष्ट्रेलियामा को’रोना लागेका नेपाली यु’वक ७ दिनमै निको भएर अस्प’तालबाट फर्किए !
काठमाडौँ । होबार्ट, अष्ट्रेलियाको तास्मानियामा को’रोनाबाट ग्र’सित एक नेपाली युवक सं’क्रमण देखिएको ७ दिनमै नि’को भएका छन् ।मार्च ७ तारिख शनिवार ती युवकमा को’रोना सं क्रमणको पुष्टी भएको थियो । को’रोना सं क्रमण ह’टेपछि सात दिन अस्पताल बसेर ती युवक अघिल्लो शनिवार मार्च १४ तारिखमै घर फर्किसकेका छन् ।
उनमा को’रोना सं’क्रमण देखिएको आउने शनिवार मात्र १४ दिन पुग्दैछ । को’रोनाको सं क्रमण सामान्यतया १४ दिनसम्म रहने भएपनि नेपाली युवक भने एक सातामै घर फर्किनुलाई सुखद रुपमा हेरिएको छ ।
अस्पताल भ’र्ना हुनु हप्तादिन अघि नै उनमा को’रोना सं क्रमण भएकोले चाढै ठिक भएका हुन् वा उनको शरिरको प्र’तिरक्षा प्र’णाली ब’लियो भएर यो भने अनुसन्धान कै पाटो हो । रोयल होर्बाट अस्पतालमा आ’इसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएका ती २० वर्षका नेपाली युवकमा केही दिनमै सं क्रमणका परिक्षण गर्दा केह ने’गेटिभ न’जिता आएको थियो ।
एक जना उपचारपछि घर फर्किएको तास्मानियाको स्वास्थ विभागले पनि पुष्टी गरेको छ । अस्पताल भ’र्ना भएलगत्तै भोलीपल्ट गरिएको प’रिक्षणमा नै ने’गेटिभ रिजल्ट आएको ती युवकलाई उदृत गर्दै तास्मानिया एनआरएनका संयोजक सन्देश परियारले जानकारी दिए ।